XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo la-taliyihiisa dhinaca amniga u magacaabi doonno Fahad Yaasiin – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo la-taliyihiisa dhinaca amniga u magacaabi doonno Fahad Yaasiin
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu Fahad Yaasiin u magacaabi doonno la-taliyihiisa dhinaca amniga, kadib markii dowladda Soomaaliya ay codsi hordhigtay amiirka dalka Qadar.
Codsiga dowladda Soomaaliya ee amiirka dalka Qadar ayaa ahaa in dowladda Qadar ay wada-hadalsiiso kooxda Al-shabaab iyo dowladda, islamarkaana dib u heshiisiin guud laga sameeyo Soomaaliya.
Qorshaha dib u heshiisiinta dowladda iyo Al-shabaab ayaa ka mid aheyd qodobaddii ugu weynaa ee uu madaxweyne Farmaajo dhawaan la tagay dalka Qadar, iyadoona xilka loo magacaabi doonno Fahad Yaasiin uu haatan haayo nin lagu magacaabo Xuseen Macalin Maxamuud.
Xuseen Macalin Maxamuud ayaa la xasuustaa inuu ka mid ahaa dadkii hoggaaminayay ololaha uu madaxweyne Farmaajo kusoo baxay doorashadii dalka ka dhacday 8-da bishii February ee 2017-ka.
Dowladda Soomaaliya ayaa waddo qorshe dhaqaale badan ku baxaayo oo ay dowladda Qadar maal-gelin doonto, iyadoona dowladda Soomaaliya ay qorshahaan la kaashaan doonto dalal kale oo aanay weli magacaabin dalalka ay yihiin.